Galmada Habeenka Koowaad Waa Habeen Cajiib Ah - Cishqi.com
Galmada habeenka koowaad waa habeen ka duwan habeenada kale, sabab? sababtoo ah waa habeenka ugu quruxda badan nolosha, waa habeen taariikhi ah oo ay mudan tahay in taalo loo sameyso.
Had iyo jeer raaxada guurka waa macaan laakin waxaa ka sii macaan galmada habeenka koowaad. Marka aad habeenka koowaad raaxo sameyso weliba adigoo aad u degan, habeenkaasi waxa ay noqon kartaa habeenka ugu quruxda badan noloshaada.
Sidoo kale marka aad tilmaamahaan raacdo waxaa xaqiiqo ah in galmada habeenka koowaad ay noqon doonto mid leh xiiso gaar ah, habeen cajiib ah oo ka duwan habeenada kale.
Qormadani waxa ay sidoo kale kugu dhiiro gelin doontaa in aad diyaar u noqoto sameynga raaxada ugu macaan bilaa cabsi. Galmada habeenka koowaad waa habeen muhiim ah oo ay waajib tahay in aad wax ka ogaato, laakin waxba haka welwelin, wax walbaa inta ayaad ku baran doontaa.
10 ka waxyaabood ee la sameeyo galmada habeeenka koowaad
U noqo diyaar raaxada galmada habeenka koowaad
Raaxada Galmada habeenka koowaad kala hadal lamaanahaaga
Isku soo diyaariya raaxada galmada si wadajir ah
Baro meelaha ugu dareenka badan ee jirkaaga
Doorta Meesha iyo waqtiga idinku haboon
Galmada waa in aysan xanuun yeelan
Isa siiya habeenka koowaad waqti fiican
Xishoodka galmada waa wax caadi ah
U qisha lamaanahaaga raaxada aad dareemeysaan
Ugu dambeys galmada
1. U noqo diyaar raaxada galmada habeenka koowaad
Galmada habeenka koowaad waa habeen cajiib ah oo ka duwan habeenada kale. Waxaa kugu cusub wax walbaa. Inta aadan galmo la sameynin lamaanahaaga, waxaa fiican in aad isweydiiso:
Yaad u sameyneysaa raaxada galmada – Ma adiga ayaa rabo mise lamaanahaaga dartii? Mise waxaad ku fikireysaa waa uun raaxada galmada habeenka koowaad, maxaa yeelay saaxibadaa oo dhan ayaa sidaas sameeyay. Adna waa kugu waajib in aad raaxada galmada la sameeyo lamaanahaaga.
Marka aad galmada habeenka koowaad sameyneyso waxaa muhiim ah in aad go’aansato in rabitaanku uu ka yimid dhankaaga oo aysan kaa ahayn, waa la sameeyo uun galmada habeenka koowaad.
Xaqiiji in ay kaa tahay 100% oo aad diyaar u tahay in aad sameyso raaxo bilaa cabsi ah.
Raaxadu waa dareen ka yimaado qalbiga, haddii aadan diyaar u ahayn habeenkaas, waxaa laga yaabaa in aadan si fiican u raaxeysan, lamaanahaaguna uu kuu fahmo qalad. Maxaa yeelay kaama muuqato wax rabitaan ah.
Hadaba haddii ay cabsi kugu jirto, habeenkaas diyaar uma tihid in aad galmo sameeyso.
2. Raaxada Galmada habeenka koowaad kala hadal lamaanahaaga
Mararka qaarkood ma ahan wax fudud in aad kala hadasho lamaanahaaga arin ku saabsan raaxada galmada laakin waa wax aad u muhiim ah. Waxaa shaki ku jirin habeenka ugu horeeyo in aad dareemeyso xishood iyo welwel, taasina waa wax caadi ah.
Ma tihid qofkii ugu horeeyay ee sidaas dareemo, dhamaan weynu soo wada dareennay. Isku day in aad lamaanahaaga ula hadasho si daacad ah oo aanan xishood ku jirin, u sheeg waxa aad markaasi dareemeyso.
Waxaa laga yaabaa in aadan hubin sameenta arintaasi laakin fursaddu ay aad u qurux badan tahay.
3. Isku soo diyaariya raaxada galmada si wadajir ah
Sameynta raaxada galmada waa wax qurux badan laakin waxaa ka sii qurux badan marka aad isku soo diyaarisaan. Maxaa yeelay galmadu waxaa qurxiyo rabitanka wadajirka ah.
Sidee isugu soo diyaariyaa?
Inta aysan raaxada galmada aysan bilaaban waxaa qurux badan in aad nadiifiso jirkaaga, isna carfiso. Markaa kadib iska xiir shuunka/bisiqa, sameyso waxyaabo xusuus gelinayo lamaanahaaga.
Hana iloobin in aad la kaftanto, una shido heeso romantic ah oo qurux badan gaar ahaan kuwa nuucaan ah ee aadka u degan.
4. Baro meelaha ugu dareenka badan ee jirkaaga
Galmada ugu quruxda badan uguna macaan waa marka aad taqaano halka uu jirkaaga raaxo ka dareemo. Habeenka koowaad ee aad sameyneyso raaxada galmada ma taqaanid meelaha ugu dareenka badan ee jirkaaga laakin waa fursad qaali ah oo aad ku baran karto.
Markuu lamaanahaaga taabto meelaha qaar waxaad hubsaneysaa in halkaasi ay tahay goob adiga kuu muhiim ah oo aad wax badan ka dareemeyso.
Waxaa shaki ku jirin in lamaanahaaga kaa codsan doono in aad u qishto halka aad jeclaan lahayd ama aad ka hesho dareen waali ah si uu kuugu raaxeeyo raaxo bilaa hagar ah.
Hadaba baro meelahaas si haddii uu lamanahaaga ku weydiiyo aad ugu sheegto.
5. Doorta Meesha iyo waqtiga idinku haboon
Tusaale u qor lamanaahaaga:
Ciyaarta adaga ee Aniga iyo Adiga: Goob hebel Taariikhdu markeey tahay 14.02. 2022 saacaduna ay ku beegan tahay 8:00 pm waa habeen ka duwan habeenada kale, maxaa yeelay waxaan la kulmayaa mustaqbalkeyga.
Marka aad sameyso goob gaar ah iyo waqti cayiman wuxuu lamaanahaagu ka fikirayaa goobtaasi iyo waqtigaas. Waxaa maskaxdiisa buux dhaafinayo dareen qurux badan. Ma sugi karayo maalintaasi, maxaa yeelay waa maalin cajiib ah.
Hadaba sameysta waqti iyo meelo idin gaar ah, maxaa yeelay waxaa sii siyaadayo dareenka macaan ee aad isu qabtaan, waxaana maskaxdiina buux dhaafinayo waxa quruxda badan ee aad sameyn doontaa.
6. Galmada waa in aysan xanuun yeelan
Qalbi tartiib wax fudud sax oo uu lamaanahaagu fahmi karo? Hadaba ku dheh sidaas. Raaxada Guurka waa dareen aad u macaan laakin dareenkaasi ma ahan in uu noqdo mid xanuun leh.
Qish: oohinta dumarka xiliga galmada ay sameeyaan
Gabdhaha qaar waxaa ku qufulan sheeko xanuun leh laakin taasi waa uun sheeko, ma jiraan wax xanuun la yiraahdo, haddii aad isugu raaxeysaan sii aayar aayar ah kadibna waxaad arkeysaan idinkoo dhex mushaaxayo beerta raaxada.
Muhiim waxaa ah oo kaliya in gabadhu ay u sheegto ninkeeda haddii aad xanuun dareemeyso. Ninkuna waxaa fiican in uu xaaskiisa weydiiyo, haddii ay wax xanuun ah jiraan. Haddii intaasi la xaqiijiyo, raaxadu waxa ay isugu dhaceysaa si aanan caadi ahayn.
7. Isa siiya habeenka koowaad waqti fiican
Galmadu waxa ay u baahantahay waqti iyo degeanaan. Isa siiya waqti oo sheekadu ha u socoto si tartiib tartiib ah. Sameeya waxa aad jeceshihiin hana ka baqanina in aad muujisaan dareenkiina. Taasi waa muhiim, haddii kale raaxadu ma yeelaneyso wax dhadhan ah.
8. Xishoodka Raaxada Galmada waa wax caadi ah
Kulanka gogosha ama galmada in la kala xishoodo marka ugu horeyso waa wax caadi ah. Waxaad sameyneysaa wax aadan horay u sameyn jirin. Wax bataatanba kugu cusub laakin waa caadi.
In aad lamaanahaaga hortiisa dharka isaga bixiso waa wax xishood leh laakin maalmo kadib waxaad arkeysaa iyadoo caadi kula ah.
Bilowga galmada ama galmada habeenka ugu horeyso had iyo jeer waa ceynkaas.
U muuji lamaanahaaga karti iyo kalsooni iskuna day in aadan ka xishoon.
9. U qish lamaanahaaga raaxada aad dareemeyso
In aad raaxo aan caadi ahayn dareemeyso waxa kaliya ee uu lamanaahaagu ku ogaan karo waa adigoo u qisho.
Xiliga aad la raaxeysaneyso ninkaaga/xaaskaaga waxaa fiican in aad u qishto halka aad raaxada badan ka dareemeyso si uu lamaanahaaga u ogaado, uguna noqnoqdo meelahaasi marar badan.
Qaabka ugu fudud ee aad ugu qishi karto lamaanahaaga
Marka uu lamaanahaaga meelaha qaar taabto qaasatan meelaha kacsiga leh ee aad ku raaxeysaneyso sameey waxyaabahaan sida:
Gudaha ugu sii riix
Xiligaasi isha ku haayo dhaqdhaqaaqa jirka lamanaahaaga iyo dhawaqa ka soo baxayo. Hana isku dayin in aad xoog u sii wado, adigoo is dhahayo awood isku sii yeel.
10. Ugu dambeys galmada
Galmada macaan waxa ay kordhisaa jaceylka lamaanaha mararka qaarna weey burburisaa. Galmadu waxa ay noqon kartaa mid cajiib ah laakin waa in ay ahaado mid ka timid rabitaankiina.
Haddii aad dareemeyso farxad kuna qanacsan raaxada lamaanahaaga, galmadu waxa ay noqoneysaa mid maalinba maalinta kale ka maacaan.
Ducooyinka la aqbalo iyo waqtiga ugu haboon
Geeraar Jaceyl Oo Xul Ah Kuwii Ugu Dambeeyay